Thursday September 20, 2018 - 20:52:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kumanaan qof Soomaali ah ayaa burburiyay Tarmuusyadooda iyagoo ka baaraya wax ay ku sheegeen Kaniini Kansarka laga qaado arrinkaas oo saameeyay qoysas badan.
Baraha Bulshadu ku kulanto ayaa si aad ah layskula dhax qaaday arrintan waxaana baraha lasoo geliyay sawirro iyo Video-yo muujinayay daraasiin Tarmuusyo ah oo laburburiyay.
Wararkan ku tiri kuteenta ah ayuu qofba si uga hadlayay dadka qaar waxay sheegeen in tarmuus walba ay dhinacyada uga dhegganyihiin sedax Kaniini illaa afar kaniini kuwaas oo halis ku ah caafimaadka bani'aadamka,halka dadka kale ay ku sheegeen in ay yihiin walxo suuf ah oo aysan kaniini aheyn kuwaas oo loogu talagalay in ay is xoqid ka ilaalinayaan labada dhalo ee shaaha kululeeya.
Arrintan oo saameysay bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka waxay sababtay in kumanaan Tarmuus la burburiyo walina waxaa taagan sas iyo cabsi ay dadku ka qaadeen wararkan faafay ee ah in Tarmuusyada ay dambada uga dhegganyihiin Kaniiniyo halis ku ah caafimaadka.
Dad badan ayaa aaminsan in waxani yihiin dacaayad rakhiis ah oo lagu doonayo in lagu khasaariyo hantida shacabka ujeedka laga leeyahayna uu yahay in musallafaad loo horseedo shirkadaha ganacsiga ee dibadda kasoo waarida Tarmuusyada shaaha lacago lagu shubto.
Qaar kamid ah magaalooyinka dhaca wilaayaatka Islaamiga Soomaaliya ayaa iyana kamid ahaa meelaha lagu burburiyay tarmuusyada dadkuna ay si aad ah wax isaga weydiinayeen wararka kutiri kuteenka ah ee faafay.
Muuqaal uu baraha bulshada soo dhigay qof is xilqaamay ayuu sharraxaad waafi ah uga bixiyay xaqiiqda waxa ay yihiin walxaha kaniiniga umuuqaalka ah ee Tarmuusyada ku dheggan wuxuuna shacabka Soomaalida ugu baaqay in ay Alle ka baqaan oo aysan maalmooda ku ciyaarin wuxuu yiri "waxaan waa been ee yaysan shacabka Soomaaliyeed hantidooda ku cayaarin, Tarmuusyada waxa hoos kaga dheggan waa suuf ee ma ahan Kaniiniyo Kansar sababa".
Wararka nuucaan oo kale waxaa sameeya dad raadinaya in ay saameyn ku dhax yeeshaan bulshada sida warkii beenta ahaa ee bilo ka hor faafay oo lagu sheegay in gobolka Hiiraan lagu arkay magaalo guuraysa.
Halkan ka degso Sharraxaad ku saabsan walxaha ku dhaxjira Tarmuusyada ama Hoos Ka Daawo
Video+Sawirro: Xaaladda Itoobiya oo Faraha ka baxday iyo Hoggaamiyaha Tigreega oo digniin culus diray.